Deg Deg:Ciidamada Daraawiishta Jubland oo dilay 20 Xubnood oo ka mid ah Ururka Alshabab. | Ogaden24
Deg Deg:Ciidamada Daraawiishta Jubland oo dilay 20 Xubnood oo ka mid ah Ururka Alshabab.
Oct 7, 2019 - Aragtiyood
Wararka aan ka helayno Maagalada Kismaanyo ee xarunta maamulka jubaland ayaa sheegayay in Hawlgalo ay saaka sameeyeen ciidamada Daraawiisha Maamulkaasi ay kudileen ilaa 20 xubnood oo ay sheegeen in ay kamid ahaayeen Ururka alshabaab.
Abaanduulaha Guutada 1-aad ee Ciidamada Daraawiishta Dowlad Goboleedka Jubbaland Khiyaar Cabdi Maxamed sheegay in howlgalkaas ay ku dileen Saraakiil ay kamid ahaayeen madaxii Al-shabaab u qaabilsanaa deeganada galbeed ee Kismaayo iyo madaxii Miinooyinka oo lagu kala magacaabi jiray Tasmiir iyo Cadaani .
Howl galkaan ayaa subaxnimadii hore ee saaka ay sameeyeen Ciidamada Daraawiishta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa uu ka dhacay tuulooyin ku dhow dhow deegaanka deegaanka Cabdalla Biroole oo qiyaastii 55KM dhanka bari kaga beegan Magaalada Kismaayo ee caasimada u ah Jubland.